हिमाल खबरपत्रिका | ‘उन्नति पूर्वाधारले होइन, मानव संसाधनले गर्छ’
‘उन्नति पूर्वाधारले होइन, मानव संसाधनले गर्छ’
मानव संसाधनको महत्व बुझउन क्रियाशील संस्था ‘ग्रोथ सेलर’ले हरेक वर्ष विदेशी विज्ञ झ्किाएर नेपालमा मानव संसाधन सम्मेलन (एचआर मिट) आयोजना गरिरहेको छ । संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक मोहन ओझा भन्छन्, “यसबाट जनशक्तिको राम्रो व्यवस्थापनले मात्र उन्नति ल्याउँछ भन्ने सचेतना बढेको छ ।”
‘एचआर मिट’हरूको प्रतिफल के छ ?
छैटौं ‘एचआर मिट’ मा आइपुग्दा नेपाली संस्थाहरूमा मानव संसाधनको महत्व बढेको छ । सन् २००८ मा यहाँ ३० वटा जति कम्पनीमा मानव संसाधन विभाग थिए, अहिले ३०० बढी कम्पनीले विभाग खोलेका छन् । संस्थाको उन्नति पूर्वाधारले होइन, जनशक्तिका कारण हुन्छ भन्ने ज्ञान बढेको छ ।
मानव संसाधनको महत्व के हो त ?
प्रभावकारी कार्यसम्पादन र प्रतिफलका लागि मानव संसाधनको महत्व छ । नेपालमा ट्रेड युनियनका नेताहरूलाई मानव संसाधनको महत्व बुझउन नसकिएकै कारण उद्योगहरूमा चरम राजनीतिकरण भएको हो । नीति निर्माताहरूले यसको महत्व नबुझदा बौद्धिक र शारीरिक श्रम गर्ने नेपालीहरू विदेश पलायन भएका छन् ।
मानव संसाधन विभाग गठन गरिएको संस्थामा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिइएको होला ?
स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिएका संस्थाको प्रतिफलमा असर देखिएको छ ।
सरकारी क्षेत्रमा मानव संसाधन व्यवस्थापनको अभ्यास कस्तो छ ?
सरकारी क्षेत्रमा त यसको अभ्यासै शुरू भएको छैन । मानव संसाधन मन्त्रालय गठन गर्ने कुरा पनि सेलाएको छ । त्यसैले हो, सरकारी क्षेत्रप्रति सेवाग्राहीको गुनासो धेरै भएको । सरकारी संस्था र निजी प्रतिष्ठानहरूको प्रतिफलको तुलना गरेर हेर्दा पनि यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।
नेपालमा व्यक्तिको रुचि हेरेर काम दिने अभ्यास छ ?
कोसँग के क्षमता छ र उसलाई के काम दिने भन्ने निर्धारण नगरिंदासम्म संस्थाले उन्नति गर्न सक्दैन । नेपालमा एकातिर ठूलो संख्यामा युवा बेरोजगार छन् भने अर्कातिर संस्थाहरूले खोजेको जस्तो जनशक्ति भेटेका छैनन् । धेरैजसो संस्थाले जनशक्तिलाई सम्पत्ति नठानी कामलाई मात्र महत्व दिएका छन् । तालिम र सेवा सुविधालाई महत्व दिइएको छैन । बेलुका तरकारी कसरी किन्ने भनेर चिन्तित जनशक्तिले कसरी राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ ?